९२ करोडको आइपीओ ल्याउँदै कालिन्चोक केबलकार, स्थानियलाई कति कित्ता ? - Khabar Center
९२ करोडको आइपीओ ल्याउँदै कालिन्चोक केबलकार, स्थानियलाई कति कित्ता ?
दोलखा जिल्लाको कालिन्चोकमा सञ्चालनमा रहेको कालिन्चोक दर्शन केबलकारले ९२ करोड रुपैयाँको साधारण शेयर (आइपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ। उक्त कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानियलाई १२ लाख कित्ता शेयर बिक्री गर्ने भएको छ।
त्यस्तै, कम्पनीले नबिल इन्भेष्टमेन्टलाई आयोजनामा प्रभावितलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित १२ लाख कित्ता शेयर बिक्री गर्न बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ।
माघ–१३ गते भएको सम्झौता अनुसार नबिल इन्भेष्टमेन्टले स्थानीयवासीका लागि सो शेयर बिक्री खुलाउने तय गरेको हो। सोहि सम्झौता प्रस्तावमा कालिन्चोक दर्शनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोका शिवाकोटी र नबिल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत मनिष नारायण जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
साथै, कम्पनीका अनुसार स्थानीयवासीलार्ई आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको जनाएको छ। शेयर बजारको ओरालो यात्रा कायमै रहेता पनि कालिन्चोक दर्शन केबलकारको शेयरले भने लगानीकर्ताहरु लाभान्वित हुने देखिन्छ।
प्रकाशित मिति :माघ १४ २०७८ शुक्रवार - १२:३७:१३ बजे
नेप्सेमा दोहोरो अंकको सुधार, कारोबार रकम भने एक अर्बमा खुम्चियो
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने १० अर्बको विकास ऋणपत्रको बोलकबोल भोली
दुई कम्पनीलाई बोर्डले दियो आईपीओ निष्कासनको अनुमति, कुनको कति ?
एनएमबि बैंक २१.९३ मेगावाटको काबेली ३ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य लगानी कर्ता
१६ अङ्कले बढ्यो शेयर बजार: यी १० कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार, कुनको कति ?